Ku safridda Easter mahadsanid Google Earth - THE INDIAN FACE
Ku safrida Ista mahadsanid Google Earth
Ku safridda xilliyada COVID maahan hawl fudud. Waxaa jira dalal badan oo aan u oggolaan soo galitaanka dalxiisayaasha ajnabiga ah, iyo dalal aan u oggolaan dadka deggan in ay ka baxaan, sidaas darteed, in kasta oo ciidda Easter ay tahay wax la mid ah oasis xorriyadda bartamaha sanadka, sannadkan waan ku raaxeysan doonnaa isagoo ka tagaya Spain. Hubaal waxaad u maleyneysaa sidayada oo kale: Waxaan dooneynaa inaan safrino, waxaana dooneynaa inaan u safreyno sida ay tahay.
En The Indian Face Waxaan aaminsanahay inaad ka faa'iideysan karto maalmaha nasashada, waana sababta boostadan ay kuu siineyso meelo badan oo aad u safri karto Easter 2021 oo aadan hubin weli, halkaasoo aad uga tagi karto guriga… miyaadan na aaminsaneyn?
Qor meelahan liistada liiska rabitaanka oo aad hubaal awoodi doontid inaad bilawdo ka gudubka goor dhow. U oggolow maskaxdaada inay duusho waxay kaliya u fududahay qaar, dadka kalena waxaa jira Google Earth, oo ah aaladda ugu habboon ee lagu safri karo meel kasta oo adduunka ka mid ah, meel kasta oo aad joogto.
Google Earth Online waa barnaamij kumbuyuutar ah oo kuu oggolaanaya inaad ku dhex quusato badaha, aad ku dul duusho buuraha oo aad gasho meelaha aan aadka looga aqoon meeraha. Qalabkani wuxuu si tartiib tartiib ah u noqonayaa ikhtiyaar ku habboon in lagu ogaado adduunka. Intaa waxaa sii dheer, Google Earth waxay hadda bixisaa tours hagitaan ah (run ahaantii) NASA, BBC Earth, ama National Geographic.
Google Earth Pro waa ikhtiyaar aad ufiican oo dhameystiran marka loo eego Google Earth khadka tooska ah, maadaama loo qorsheeyay si aad uga isticmaali karto miiskaaga. Noocani wuxuu bixiyaa xogta dhammaystiran ee xogta geospatial-ka ee la heli karo, waxaa sidoo kale ku jira sawirro xallinta sare leh, jidadka 3D ee magaalooyinka dhex mara, aragtiyo cajaa’ib leh oo laga soo qaado jidadka, sawirro taariikhi ah ama qodobbo muhiim ah oo xiiso leh.
Waqti ka hor Google waxay cusbooneysiisay geeddi-socodka si loo soo dejiyo Google Earth Pro taasoo fududeynaysa. Si loo helo qalabkan, waa inaad si fudud u aadaa websaydhka Google Earth, iyo geeska midig ee kore waxaa jira ikhtiyaar ah in laga furo dhulka Chrome. Si loo rakibo nooca Pro, waa inaad riixdaa badhanka Google Earth Pro kombiyuutarada. Labaduba waa lacag la’aan.
10-KA MAGAALO EE UGU FIICAN EE KU SOO SOCDA TODOBAADKA 2021 EE DHULKA GOOGLE
Waxay ku taal bartamaha bari ee ugu weyn Australia, dhagax weyn oo laga sameeyay meel 2 kiiloomitir u jirta Byron Bay ayaa loo rogay keyd, wuxuu hoy u yahay in ka badan 500 nooc oo kalluun ah oo ka yimaada biyaha kulaylaha iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Kooxda yar ee jasiiradaha ah ee ka muuqda biyaha korkeeda, qaabkooduna u ekaan karo kan qalbiga, wuxuu ku leeyahay quraafaad xiise badan gadaashiisa. Magaca asal ahaan loo bixiyay jasiiraddan ayaa ah Nguthungulli, oo macnaheedu yahay "Aabbaha Adduunka", oo isagu ah abuuraha dhulka iyo biyaha, xoolaha iyo dhirta, ayaa door hoggaamineed ka ciyaaray sheekadan. Dhaladka Australiyaanka ah, dhagaxyadan waxaa abuuray nin xaasid ah oo waran ku tuuray doonnida ay xaaskiisa iyo gacalisadiisu fuuli jireen. Doontii ayaa jabtay oo bilaabay inay degto, iyadoo kaliya ka hartay qaanso iyo qaanso biyaha korkeeda. Labadan daraf waxay noqdeen waxa aan hadda u naqaanno Julian Rocks.
Kuwa jecel quusitaanka, tani waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu dhaqmo. Wax yar uun ka hooseeya dusha sare, waxaa la abuuray waxyaabo qurux badan oo kuleylaha ah iyo biyo aad u qabow, oo hoy u ah in ka badan 500 oo noocyada badda ah, kuwaas oo aad ka dhex arki karto xayawaanka loo yaqaan 'Leopard shark', Gogolka loo yaqaan 'Loggerhead tillles', dolphins ama manta rays. Intaas waxaa sii dheer, layaab kale oo lagu arki karo biyahan hoostooda ayaa ah dhagaxaanta dhuxusha.
Waxaad ku quusin kartaa taariikhda dhagxaanta, noocyada iyo quusitaanka Julian Rocks adoo adeegsanaya xiriiriyahan : https://bit.ly/3rj1xSs
Ma rabtaa inaad gasho Istaag dhab ah? Ma jiro meel quduus ah oo aan ka ahayn Yeruusaalem. In kasta oo jidadku isku mid yihiin sanadka oo dhan, haddana indhaha kuwa aaminka ah - iyo dalxiisayaasha - way kala duwan yihiin xilligan oo kale sanadka.
Waxay ka buuxaan xaflad, aamusnaan iyo codad laga maqlo dhagxaanta duugoobay ee Old City oo dhererkeedu yahay dabaaldegga shucuurta ugu badan ee Masiixiyadda.
Haddii aadan tagi karin qof ahaan, u oggolow Google Earth inuu kaa caawiyo inaad ku lugeyso waddooyinka bartamaha magaalada taariikhi ah, booqo Darbiga Baroorashada iyo qiyaasi sida Saldhigyada Iskutallaabku noqon doono, oo lagu xusayo saacadihii ugu dambeeyay ee Ciise Masiix iyada oo loo marayo kuwan dejinta.
Sawirku wuxuu u dhigmaa kun eray; isticmaal xiriiriyahan: https://cutt.ly/XxFOgyd
Waxaan u tarjumi karnaa neef ama neef cidla ah. Waa fikradda DAST Arteam, koox ka kooban farshaxanno Danae Stratou, naqshadeeye warshadeed Alexandra Stratou, iyo naqshadeeye Stella Constatinide. Farshaxanyahannadu waxay ku dhowaad laba sano ku qaadatay inay dhammaystiraan shaqada, (1995 - 1997). Shaqadu waxay leedahay aag dhan 100.000 mitir murabac.
Ujeeddada shaqadu waxay ahayd in la abuuro fikradda ah in aan la koobi karayn xannibaadaha xagga togan iyo kuwa taban leh baaxadda weyn ee lamadegaanka ku wareegsan asalka; isla midkaas oo, iyadoo la kaashanayo hawo-qabadka iyo dabaysha, si tartiib tartiib ah u xiraya oo tirtiraya. Waqtiga laga gudbayo ayaa matalaadan xad dhaafka ah u rogi doonta xusuus wax mar uun umuuqday mid aan macquul ahayn oo waaraya. Bal hadda fiiri inaad wali awooddo! Adeegso xiriiriye: https://cutt.ly/exFAqo0
Macbudyadan cajiibka ah ee ku yaal magaalada Siem Reap, kuwaas oo qayb ka ah qalbiga iyo sharafka Cambodia, waxaa lagu dhisay codsi ka yimid Boqorka Suryavarman II intii u dhaxaysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad, iyada oo lagu sharfayo ilaah Hindu-ga ah Vishnu, waqti markii Yurub wuxuu arkay cathedral-ka Chartres iyo Notre Dame oo cirka u kacaya.
Aaggan, oo isugu jira ruuxi, astaan ​​iyo isku ekaysiis, waxaa ka sarreeya dhammaanba booqdayaasha iyo ururiyaasha cajaa'ibyada adduunka, kuwaas oo aan seegi karin inay arkaan iftiinka ka shaandheeya dhismayaashaas muqaddaska ah, iyagoo ka dhigaya dahab. Layaab ma leh in la ogaado in loo tixgaliyo mid ka mid ah 20-ka meelood ee adduunka ugu layaabka badan.
Adeegso xiriiriye: https://cutt.ly/4xFKISd
Fardoolaynta fardaha dhex marta marinka Mongolia
Fardooley fardooley ah oo woxoogaa waqooyiga Mongolia ah, oo u dhow xadka uu la wadaago Siberia, oo ku taal harada Khovsgol, oo ah qulqulka ugu dheer ee biyaha macaan ee waddanka Aasiya (262 mitir) oo dhererkiisu yahay 136 kilomitir, ayaan u muuqan mid xun sidoo kale.
Meelkan dabiiciga ah ee muuqaalka leh waa mid qurux badan xilliga jiilaalka, maaddaama dusha sare ay ku daboolan tahay lakab adag oo baraf ah oo abuuraya asalka biyo buluug barafaysan. Waxa ugu fiican ee ku saabsan la safridda Google Earth waa inaadan ogaan doonin sida qabowgu u dhex maro lafahaaga. Biyaha harada waxay gaarayaan heerkul gaaraya 40 can oo ka hooseeya eber. Meeshan aan la magacaabin, in kasta oo ay jiraan xaalado aad u ba’an, haddana waxay ahayd goob lagu qabto xafladda barafka sannad kasta oo lagu qabto dagaallada Mongolia iyo tartamada fallaarta. Waxaad ka daawan kartaa meeshan cajiibka ah diirimaadka gurigaaga: Adeegso xiriiriye: https://cutt.ly/rxF8RDF
Ma jeceshahay inaad aragto natiijada saameynta meteorite-ka ee Dunida oo laga bilaabo 50000 oo sano? Iska ilow safarka xilliyada COVID waa wax aan la qiyaasi karin oo gebi ahaanba soo booqda qafiskan dhumucda weyn ee kunka mitir ah ee ku yaal magaalada Flagstaff, waqooyiga Arizona, (Mareykanka).
Canyon Diablo meteorite, sababta keentay godkan, wuxuu ka koobnaa bir iyo nikkel, culeyskiisu wuxuu ahaa 300.000 kun oo tan wuxuuna ku socday 43.200 kiilo mitir saacadii. Dhagxaanta goobta ay saameyntu gaadhay waxay gaareen heerkul ka sareeya 3.000 darajo Celsius qiyaastii toban bilyan oo a labaad Haddii aad rabto inaad dib ugu soo noqoto waqtiga oo aad indhahaaga ku aragto natiijada saameyntaan weyn, isticmaal xiriiriye: https://cutt.ly/9xF2XVO
Keydka Kigosi, Tansaaniya
Beertan Qaranka waxay ku taal gudaha waqooyi-bari ee Tansaaniya. Kaydka Ciyaaraha ee Kigosi waa mid ka mid ah keydadka ugu waaweyn ee Bariga Afrika maadaama uu leeyahay dhul daaqsimeed iyo deegaanno qoyan.
Helitaan la'aanta kaydkani waxay gacan ka gaysatay isu soo ururinta shimbiraha biyaha dhifka ah, marka lagu daro, meeshani waa mid ka mid ah meelaha yar ee ku yaal Tansaaniya halkaas oo aad ku arki karto xayawaanka sida Situtanga, oo ah nooc ka mid ah bahalka loo habeeyo nolosha dhulka qoyan, ama digaagga Waterbuck. Waxaan kaa tageynaa hoosta muuqaalka cajiibka ah ee lo'da lo'da oo dhex socota kaydka cajiibka ah. Adeegso xiriiriye: https://cutt.ly/nxFMUed
Xaqiiqdii haddii aad maqli lahayd meeshan khuraafaadka ah ee Inca ee Peru. Magaceeda waxaa loola jeedaa buur duug ah waxaana la dhisay bartamihii qarnigii XNUMXaad. Waxaa la rumeysan yahay inay ahayd mid ka mid ah deggenaanshaha Inca ee sagaalaad ee Inca ee Tahuantinsuyo, Pachacútec, in kasta oo ay sidoo kale ka kooban tahay hadhaaga meekho. Waxay ku taalaa premonitory dhagax weyn oo udhaxeysa Machu Picchu iyo Huayna Picchu. Waxay ku taal cirifka bari ee Andes, waana qayb ka mid ah dooxada sare ee Amazon, taas oo leh ubaxyo iyo duunyo aad u kala duwan waxayna siinaysaa xitaa qiime muuqaal ah meesha quduuska ah.
Meesha macbudka ah ee Machu Picchu waxay ahayd shaqadii ugu dhisnayd ee dhismeed ee Boqortooyada Inca. Gidaarradeeda, teeraaradeeda iyo geedaheeda dhaadheer waxay umuuqdaan kuwo lagu xardhay buuraha dhagaxa, iyagoo siinaya aragti ah inay kamid tahay. Socdaalayaashu waxay u yimaadaan Aguas Calientes si ay u bilaabaan jidka Inca ee Hiram Bingham, borofisar Yale ku caanbaxay bilowgii qarnigii XNUMXaad.
Adeegso xiriiriye oo aad dareento sambabahaagu inay hawo cusub ka buuxinayaan meel fog: https://cutt.ly/UxFGemq
Ka fikir hadda inaad fadhiisato kursiga hore ee gaarigaaga, oo leh aragtiyo aan caadi aheyn oo ku saabsan Manhattan qorrax dhaca oo aad sugeyso filim inuu ka bilowdo gaariga, ama aad mid ka mid ah kormeerayaasha cajiibka ah ee 'The Big Apple', fiiri daaqadda, ka fikir habeen diiran Skyline-ka quruxda badan ee magaalada una ogolow maqaarkaaga iyo naftaada inay xanuujiso.
Haddii aad rabto inaad u safarto magaalo weyn oo aad rabto riyo maalmeed, qiyaasi sida ay tahay inaad ku dhex socoto waddooyinka dadku ku badan yihiin ee New York, ku cuno eey kulul kursiga keydka ee Central Park, iyo bacel sheeko xariir ah mar dambe, tag taksi kaliya maxaa yeelay had iyo jeer waa magaalada dhexdeeda, ama sidaas ayaan u maleyneynaa, ama u aqoonsanaa geesaha caanka ah iyo dhibcaha calaamadaha muuqaalka filimka sheekooyinka marar badan, fur Google Earth, ku dheji Frank Sinatra "New York, New York" dhagahaaga, qaado Cosmopolitan oo fadhigeedu yahay fadhiga salaan sharaf ee reer New York iyo uAdeegso xiriiriye: https://cutt.ly/ixF3LkP
Jabbaan waxay caan ku tahay aduunka oo dhan xilligeeda ubaxeedka cherry. Markay gu’gu bilaabmaan, kumanaan geed oo ku yaal Japan oo dhan waxay isu rogaan casaan, casaan iyo cadaan, oo dhalaala dhulka
Midabka qarxa inta udhaxeysa bilaha Maarso iyo Abriil waa mid soo jiidasho leh, iyo muuqaalka dabiiciga ah ee dhaca si aad u xun, in Jabbaanku ay magac sax ah u bixiyeen macaanida ubaxa cherry ee Japan: sakura. Haddii aad dooneysay inaad booqato magaalo kale oo weyn, hadda waa waqtigii ugu habboonaa ee lagu bilaabi lahaa safar dijitaal ah oo loo tago Tokyo oo loo arko sida geedaha cherry-ka ahi meeshan ugubaxeen; Adeegso xiriiriye: https://cutt.ly/zx0PZs6
Socdaalka, aragtida adduunka iyo barashada dhaqammada kale waa, oo had iyo jeer ahaan doontaa, iyadoo aan loo eegin xaaladaha aan ku qabanno, waayo-aragnimo kobcisa maskaxda iyo ruuxa. Ku safridda Google Earth waxay la mid tahay akhrinta sawirrada.
Waxaad baraneysaa, qiyaasi kartaa oo aad ku faraxsan tahay muuqaalka dhirta iyo dhammaan meelahaas oo aadan aqoon. Marka la ogaado in adduunku aanu ahayn sidaan ku gaari karno oo ay jiraan kun geesood oo qarsoon oo aynaan waligood ogaan doonin, mararka qaarkood waa wax cajiib ah. Laakiin ma jiro wax xad ah oo ay leeyihiin kuwa doonaya inay cagaha dhigaan dhammaan meelaha Dunida, xitaa haddii ay hadda tahay inay xoogaa sugaan.
The Great Barrier Reef waa deegaankii ugu weynaa ee ku qarqiya meeraha oo dhan. Sababtaas awgeed, duunyadeeda ayaa ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan meeraha. Halkan ka ogow waxa xayawaan ee aan ka heli karno tan e
5-ta goobood ee barafka ugu fiican Peninsula Soo saar muraayadaha indhaha!
Spain iyo Andorra waxay leeyihiin daraasiin goobo baraf ah iyo aagag freeride ah oo loogu talagalay dhadhanka oo dhan ... Shaki la'aan kumanaan tacabiiro, boodbooyin, pirouettes iyo kuwa dhaadheer ayaa kugu sugaya saldhigyadooda kala duwan. Miyaad horeba isku dayday
Edurne Pasaban, taariikh nololeedkeedii gaabnaa ee boqoradda sideed kun Edurne Pasaban waa Toulouse oo dhalatay Ogosto 1, 1973, oo ah qof caan ah oo buur fuula, taariikhda ayaa ku xusi doonta haweeneydii ugu horreysay
Ka soo bilaabashada xoqida had iyo jeer waa caqabad weyn iyo go'aan adag. Xaqiiqdii waxaad la yaaban tahay waxyaabaha sida ... Sidee loo bilaabaa orodka? Waan awoodi doonaa inaan sameeyo? Waa inaan sameeyaa? Gudaha The Indian Face
Tartanka raad raadinta ugu caansan uguna caansan!
Ma jeceshahay socodka raadadka iyo ciyaaraha xiisaha leh? Masaafo dheer oo jidadka adduunka ah waxaa daboolaya orodyahanno raadraaca sannadba sannadka ka dambeeya-off-piste, markanna waan soo ururinnay
Wali ma ka fekereyso waxa la siinayo aabbaha Maalinta Aabbaha? Waa waqtigii lagu sharad lahaa wax ka duwan oo asal ah. Maalinta aabbaha, ku dar taabashadaas gaarka ah hadiyadahaaga iyo tus
Waxaa jira dhacdooyin badan oo isboorti ah oo isu keena ciyaartooyda adduunka oo dhan, laakiin shaki la’aan dhacdooyinka u heellan orodka waxaa ka buuxa dad fara badan oo orodyahanno ah oo doonaya inay xirfadahooda imtixaanka geliyaan.